Monday January 04, 2010 - 20:29:00 in Community Listing by Super Admin
Binti Jaylaain oo ka hadlaysa Xaflad Dhaqaalo Aruurin ah ee ka dhacday Ohio
Binti Jaylaani waxay ahayd gabar Somaliyeed http://www.dayniile.com/september/29september10.htm ku dhibaataysan Magaalada Owdheegle ee Afgooye. Jaylaani waxuu ahaa Aabaha dhaley Binti oo ahaa nin wax bartey oo Macalin ka ahaa dadla Somaliyeed ( Xataa waxuu Macalin u ahaa Abdi Bile Abdi Ordaaga Caanka ee Somaaliyeed)
Binti Jaylaani maanta waxay dhigataa iskuul, way fiican tahay waxayna ka mid tahay dadka u dooda dadka dhibaataysan ee jooga Somaliya.
Runtii ma aanan qabteen arinkaan hadii adigu aadan qayb ka aheen, waadna mahad san tihiin caawinaada aad igu caawiseen.
Hadii aad doonaysid inaad ka qayb qaadatid barnaamijkaan fadlan la xariir Caabiyo Ciise 612-298-1044 ama waxaad deeqdaada gayn kartaa Dahabshiil adigoo ku shubaayo sanduuqa deeqda HRG-D-15315. Una sheeg Ururka American Somali health care foundation in lagu shubo deeqdaada. Hana yaraysan deeqdaada $1 wax ayuu badeli karaa.
Refrence: Qayb ka mid ah barnaamijkaan waxaan ka soo qaadanay Dayniile.com